5 “Ndapota, shevedzera! Pane munhu chero upi zvake ari kukupindura here?Pavatsvene, ndoupi wauchatendeukira kwaari? 2 Nokuti benzi richaurayiwa nokutambura,Uye kuva neshanje kuchauraya chero munhu upi zvake anonyengerwa nyore nyore. 3 Ini ndakaona benzi richidzika midzi,+Asi ndakangoerekana ndava kutuka nzvimbo yaro yarinogara. 4 Vanakomana varo vanoramba vari kure nokuponeswa,+Vanopwanyirwa pagedhi pasina mununuri. 5 Zvarinokohwa zvinodyiwa neane nzara;Mumwe munhu anotora nyama pane zvokukochekera nazvo zvomuurayi wemhuka painenge yakarembedzwa,Uye musungo unobata zvinhu zvavo zvokurarama nazvo. 6 Nokuti zvinhu zvinokuvadza hazvibudi muguruva,Uye dambudziko haribudi pasi. 7 Nokuti munhu anoberekerwa kutambudzika,Sepfarivari dzinodaukira kumusoro. 8 Asi ini ndaizobvunza Mwari,Uye ndaizoisa mhosva yangu kuna Mwari,+ 9 Kuna Iye anoita zvinhu zvikuru zvisingagoni kuongororwa,Zvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki;+ 10 Kuna Iye anonayisa mvura panyika+Nokutuma mvura paminda;+ 11 Kuna Iye anoisa vaya vakaderera panzvimbo yakakwirira,+Zvokuti vaya vakasuruvara vanova pakakwirira nokuti vanenge vaponeswa; 12 Kuna Iye anokonesa mazano evane njere,+Zvokuti maoko avo haashandi zvinobudirira; 13 Kuna Iye anobata vakachenjera mukunyengera kwavo,+Zvokuti zano revakangwara rinongoitwa pasina kumbofunga;+ 14 Vanosangana nerima kunyange masikati,Uye vanotsvangadzira masikati machena sokunge kuti usiku;+ 15 Kuna Iye anoponesa pabakatwa rinobuda mumiromo yavo,Uye anoponesa murombo paruoko rwomunhu ane simba,+ 16 Zvokuti akaderera anova netariro,+Asi kusarurama kunovhara muromo wako.+ 17 Tarirai! Anofara munhu anotsiurwa naMwari;+Uye usaramba kuranga kwoWemasimbaose! 18 Nokuti anoita kuti pave nemarwadzo, asi anosunga ronda racho;Anoputsa-putsa, asi maoko ake anoporesa. 19 Achakununura pamatambudziko matanhatu,+Uye pamanomwe hapana chinokuvadza chichakugunzva.+ 20 Achakudzikinura parufu munguva yenzara,+Nepasimba rebakatwa munguva yehondo. 21 Uchavanzwa pakurova kworurimi,+Hauzotyi kupamba pakunouya. 22 Uchaseka kupamba uye nzara,Uye hauzotyi chikara chepanyika. 23 Nokuti uchaita sungano nematombo omusango,Uye chikara chomusango chichagariswa pamwe chete newe norugare.+ 24 Uchaziva kuti rugare ndiro tende rako,Uye uchaenda woona mafuro ako, asi hapana chauchashayiwa. 25 Uchaziva kuti vana vako vazhinji+Uye kuti vazukuru vako vakaita sezvinomera panyika.+ 26 Uchasvika kuguva uine simba,+Sokuungana kunoita zvisote panguva yazvo. 27 Tarira! Izvi ndizvo zvataongorora. Ndizvo zvazviri.Zvinzwe, uye iwe—uzvizive.”